हामी परमेश्वरलाई हाम्रो उपहार कसरी प्रयोग गर्छन्? — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
मलाई सम्पन्न केहि प्राप्त गर्न को लागि आदेश मा, म महान् कुरा गरिरहेको छु भन्ने अर्थमा आवश्यक. "तर म यो रद्दी बाहिर ले भने, रद्दीटोकरीमा मानिस प्राप्त सुरक्षित हुनेछ?"म एक ठूलो तस्वीर मान्छे हुँ, र म कहिले काँही विवरण वा अरोचक कार्यहरू गर्न आएको छु. दुर्भाग्यवश, विवरण र अरोचक कार्यहरू वास्तविक जीवन को बहुमत हो. यो शायद म संघर्ष किन यति उच्च स्कूलमा धेरै छ, म ख्रीष्टियान बने पनि पछि. मेरो गणित कक्षाहरू बेकारी देखिन्थ्यो र गृहकार्य मेरो समय को बर्बादी जस्तै लाग्यो.
मलाई थाहा म मात्र एक सक्छन् कहिलेकाहीं उत्प्रेरित गर्न गाह्रो नभेट्टाएको छैन. जहाँ यो Blah को एक कहिल्यै समाप्त नहुने चक्र जस्तै महसुस हामी सबैलाई सप्ताह छ. हामी कहिलेकाहीं मात्र ठूलो कुरा उत्प्रेरित गर्न चाहनुहुन्छ, सबै ठूलो कथा को भाग हो किनभने तर सबै कुरा ठूलो छ. परमेश्वरले आफूलाई र आफ्नो महिमा को बताइरहेका ठूला कथा.
यो हाम्रो उपहार को पनि सत्य हो. हामी आफूलाई बारेमा कथा बताउन भागको रूपमा हाम्रो उपहार विचार परीक्षा हुन सक्छ. जीवनको सबै जस्तै अरूलाई जान्छ एउटा सानो मानिसको हालत मेरोजस्तै हामीलाई प्रभावित भइरहेको छ. जब सट्टा जीवनको सबै परमेश्वरको महिमा को ठूलो कथामा एक अध्याय छ.
आफ्नो उपहार त्यहाँ ठूलो कथा बताउन मद्दत गर्न तयार छौं.
यो सबै परमेश्वरको महिमा बारेमा
म यसरी सबै विचार गर्न थाले जब म सम्झना. म वास्तविक जवान थियो जब म rapping थाले, र म बारेमा rapped सबै आफैलाई थियो. त्यसपछि म सबै कुरा परमेश्वरको महिमा लागि थियो भनेर बुझे, यात्रा को छैन महिमा. यहाँ मलाई साँच्चै भद्रगोल कि खण्डहरूलाई एक हो.
15 उहाँले अदृश्य परमेश्वरको छवि छ, सबै सृष्टिको जेठो. 16 उसलाई लागि सबै कुरा सिर्जना, स्वर्ग र पृथ्वीमा, देखिने र नदेखिने, thrones dominions वा वा शासकहरू वा चाहे अधिकारीहरु-सबै कुरा उहाँमार्फत र उहाँलाई लागि बनाइयो.
म पावलले सबै सिर्जना छ कसरी स्पष्ट प्रेम. उहाँले केहि बाहिर छोड्ने छैन. भूमि र आकाश कुराहरू, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कुराहरू र तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कुराहरू, राजा र विभिन्न प्रकार को शासकहरू, पनि आध्यात्मिक सेना र अधिकारीहरूले. पछि पुस्तकमा (र अन्यत्र) पावलले शासकहरू वा अधिकारीहरूले रूपमा दुष्टात्मा बुझाउँछ. अनि उहाँले तिनीहरू परमेश्वरले र परमेश्वरको लागि बनाइयो भन्दै गर्नुपर्छ. खैर भने पनि दुष्ट येशूले सिर्जना, येशूको लागि, त्यसपछि पक्कै पनि हाम्रो उपहार हो.
परमेश्वर सबै कुरा सिर्जना र त्यो अधिकार छ.
यो खास कुराहरू एक परमेश्वरको अख्तियार यसलाई उहाँलाई हस्तान्तरण कहिल्यै छ बारे कि. राजा हकदार रूपमा अर्को माथि आउन. राष्ट्रपति निर्वाचित छन्. पुलिस प्रशिक्षित र एक ब्याज दिइन्छ. एक्लै परमेश्वरको अख्तियार छ जसले सधैं अस्तित्वमा छ छ.
उहाँले अरू कसैको भूमिका लिएनन्. उहाँले यसको लागि तालिम थिएन. उहाँले यसको लागि योग्य हुन छैन. उहाँले निर्वाचित कहिल्यै, र उहाँले कहिल्यै impeached गरिने. कुरा आफ्नो असल उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको आफ्नो अधिकार अन्तर्गत रहेको र खातिर सिर्जना.
त्यसैले, परमेश्वरको बस आफ्नो जीवन को भाग महिमा प्राप्त गर्ने अभिप्राय छैन, तर यो सबै.
आफ्नो उपहार विशिष्ट उद्देश्य परमेश्वरले सिर्जना, उहाँको महिमा को कथा बताउन.
जब म IKEA देखि फर्नीचर किन्न, म पहिले नै दुई कुरा थाहा: 1, यो शायद अर्को वर्ष अलग पतन हुनेछ. र 2, त्यहाँ टुक्रा र निर्देशन भित्र धेरै हुन जाँदैछन्.
छैन यसलाई म एक किताब दराज लागि अर्थ थियो कि ती स्क्रू केही लिए र अरू केही तिनीहरूलाई प्रयोग भने लाटा हुनेछ? तिनीहरूले स्क्रू र tools- गर्न काठ planks देखि एक purpose- लागि मलाई दिइएको थियो र उनि तखता निर्माणको भाग हो. हरेक एक व्यक्ति possesses उपहारहरू आफ्नो कहानी toolbox मा उपकरण हो. विशेष परमेश्वरको महिमाको कथा बताउन दिइएको. तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्न अवस्थित.
कसैले भन्न सक्छ, मलाई के हुनत? मेरो व्यक्तिगत पूरा बारेमा के? म ठूलो हुन चाहनुहुन्छ. खैर सबैभन्दा ठूलो भूमिका कहिल्यै खेल्न सक्छन्, ठूलो तस्वीर भूमिका छ. अनि परमेश्वरले हामीलाई सबै भाग हुने भनिएको छ.
तर हामी कसरी जहाँ हामी परमेश्वरको महिमा लागि हाम्रो उपहार प्रयोग एक ठाउँमा भेटिन्छ? हामी सबै पूर्ण यो छैन.
परमेश्वरको महिमा प्रेम पर्नु
समस्या हामी अक्सर छैन लायक लागि लडिरहेका र लागि जीवित कुरा परमेश्वरको महिमा देख्न छ. र यो हामी परमेश्वरको पर्याप्त महिमित रूपमा देख्न किनभने छ. जब तपाईं परमेश्वर हुनुहुन्छ कसरी महान् समझ सुरु, तपाईं यूनिभर्स उहाँलाई र एक्लै उहाँलाई वरिपरि किन घूमती समझ सुरु छौँ.
जब तपाईं यशैया 40 आफैलाई वा अरू कसैले लागि आफ्नो महिमा लिन प्रयास केही चोरी भन्दा कम छ भन्ने हेर्न. यो उहाँको पर्छ र त्यो योग्य!
म मानिसहरू परमेश्वरको घमन्ड जहाँ धर्मशास्त्रको ती भागहरु पढ्न प्रोत्साहन चाहन्छु. यशैया 40. मा हन्नाको प्रार्थना2शमूएल 2. मोशाले गीत तिनीहरूले लाल समुद्र पार गरेपछि. भजन 135.
तपाईं परमेश्वरको महिमा मा राख्यो प्राप्त नभएसम्म, तपाईंले उहाँलाई लागि आफ्नो उपहार प्रयोग गर्न ख्याल छैन.
कहिलेकाहीं यो त स्पष्ट सधैं किनभने कसरी परमेश्वरको महिमा लागि आफ्नो उपहार प्रयोग गर्न सोच्न कठिन छ. तपाईं बोल्ने उपहार वा आध्यात्मिक देखिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ जस्तो देखिन्छ जब यो थप स्पष्ट छ. वा पनि कला मा. तर आफ्नो उपहार प्रशासन वा आतिथ्य हुन थाल्छ जब यो रूपमा स्पष्ट छ.
पावलले हामीलाई केही छनकहरू अन्यत्र कलस्सी मा दिन्छ. उहाँले कलस्सी भन्छन् के सुन्न 3.
23 तपाईंले जे गर्न, heartily काम, प्रभु र मानिसहरू लागि रूपमा, 24 प्रभु देखि तपाईं आफ्नो इनाम रूपमा उत्तराधिकार पाउनेछन् भनेर थाह पाउँदा. तपाईं प्रभु ख्रीष्टको सेवा गरिरहेका छन्.
पावलले प्रशासनिक उपहार भन्ने छाप अन्तर्गत छैन, वा छोराछोरीलाई मदत उपहार, वा उपहार केवल राम्रो एक mundane काम गर्न येशूको महिमा लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन गर्न. त्यहाँ तीन सजिलो प्रश्न हो हामी त्यो भन्छ आधारित आफैलाई सोध्न सक्छौं
तपाईं कसरी काम गर्नुपर्छ? हामी "heartily काम" गर्नुपर्छ
हामी lazily काम गर्न परीक्षा गर्न सकिन्छ. विशेष गरी कुरामा जहाँ परमेश्वरको महिमा गर्न जडान रूपमा स्पष्ट छ. तर पावलले काम heartily वा आफ्नो हृदय सबै संग भन्छन्. हामी निष्कपटता र लगनशीलताको काम गर्नुपर्छ
2. कसले तपाईंलाई लागि काम गर्छन्? के तपाईं येशू लागि काम.
कहिलेकाहीं हामी कडा परिश्रम गर्न परीक्षा गर्न सकिन्छ, तर गलत मान्छे को लागि यो गर्न. हाम्रो मालिक वा हाम्रो आमाबाबुले वा सहकर्मीहरू खुसी. जबकि हामी अक्सर हामीलाई अधिकारीहरूले छन्, हामी अन्ततः परमेश्वरले तिनीहरूलाई खुसी पार्न काम गर्दै. हामी आफ्नो प्रेम कमाउन सक्नुहुन्न, तर हामी उसलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई आदर उसलाई खुशी ल्याउन.
3. तपाईं के प्राप्त हुनेछ? तपाईं इनाम रूपमा आफ्नो उत्तराधिकार
कहिलेकाहीं हामी पनि येशूको लागि कडा परिश्रम गर्न परीक्षा गर्न सकिन्छ, तर लाग्छ धिक्कार मलाई छ, म केही लागि काम. त्यो गलत हो! तपाईं परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन काम, तपाईं उहाँलाई जवाफ. र हामी हाम्रो मेहनत लागि पुरस्कृत गरिनेछ, परमेश्वरको अनुग्रह द्वारा. उहाँको अनुग्रह हामीलाई heartily काम गर्न उत्प्रेरित गर्छ र उहाँले हामीलाई गर्छ काम को लागि हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ. एक पे चेक आफ्नो जीवन वरिपरि निर्माण गर्न पर्याप्त छैन, तर अनन्त पुरस्कार हो.
परमेश्वरको महिमा लागि षडयन्त्रकारी
के तपाईं कहिल्यै कसरी हामी साँच्चै मा राख्यो हुनुहुन्छ कुराहरू लागि योजना पाएका छौं?
म मेरो आफ्नै जीवनमा यो देखेको छु र यसलाई द्वारा दोषी गरिएको. यहाँ एउटा उदाहरण छ. म जूता को एक प्रेमी हुनु हुनेछ. र केही समय म प्राप्त पनि माथि यो मा र्याप गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसैले केही हप्ता पहिले हामी अर्को शहर थिए गर्दा ठूलो घडी पसलमा जाने मौका र म यसको बारेमा उत्साहित सबै थियो. अनि त्यसपछि यो जस्तै यसलाई काम गर्न थिएन देख्यो.
म बाहिर freaked र यो हुन बनाउन समस्या धेरै मार्फत थियो. म कलहरू र उडानहरू परिवर्तन गर्ने बारे सोच थियो, आदि. तर म रोकियो र आफैलाई सोधें, "किन?"किनभने म यसलाई मा राख्यो थियो.
हामी प्रेम कुराहरू लागि योजना जस्तो देखिन्छ. हामी कुराहरू बनाउने तरिकाहरू खोज्न. र तपाईं परमेश्वरको महिमा प्रेम गर्दा तपाईं यसको लागि आफ्नो जीवनको हरेक nook र cranny प्रयोग गर्न तरिकामा फेला. उहाँले यो मूल्य छ.
मेरो सल्लाह यो छ: पीछा येशू र तपाईंले उहाँलाई मानिसहरूलाई बताउन मौका रूपमा सबै हेर्नुहोस् सम्म उसलाई प्रेम पर्नु.
Emeteria • डिसेम्बर 18, 2014 मा 2:33 बजे • जवाफ
आमिन! म यो आज सुन्न आवश्यक. धन्यवाद!
Keshia • डिसेम्बर 18, 2014 मा 2:34 बजे • जवाफ
Gordie Tamayo • डिसेम्बर 18, 2014 मा 2:54 बजे • जवाफ
साझा लागि धन्यवाद. यो धेरै आवश्यक र हृदय लगियो. जी
गगन • डिसेम्बर 18, 2014 मा 8:36 बजे • जवाफ
साँच्चै, मेरो जीवन मेरो प्राथमिकता यो पढेर दृष्टिकोण हालिदिए छन्…… कहिलेकाहीं म कम महसुस म के गर्न भनिन्छ छु काम संग पूरा…..यति धेरै उपहार परमेश्वरको म संग मलाई आशिष् दिनुभएको छ भनी अधिकांश समय बदनाम गर्छन त…..यसरी म परमेश्वरले र यसलाई म के र मेरो हुँदैछन् किन एक्लै उहाँको महिमा र महिमा लागि हो कि भूल मेरो सेवा प्रेम र प्राण उद्देश्य विस्थापित मलाई कल काम धेरै अर्थ बदनाम……#blesstobecallforpurpose #
Kaputula ल्याउन • डिसेम्बर 20, 2014 मा 4:37 छु • जवाफ
गहिरो bro.am प्रोत्साहन
माइकल • डिसेम्बर 22, 2014 मा 3:11 छु • जवाफ
तपाईंले उहाँलाई मानिसहरूलाई बताउन मौका रूपमा सबै हेर्नुहोस् सम्म 'Chase येशू र उहाँको प्रेम पर्नु।’
कसरी भने हुन सकेन को राम्रो तरिका पत्ता लगाउन सक्दैन. सधैं प्रेरणादायी.
क्रिस • जनवरी 8, 2015 मा 12:23 बजे • जवाफ
ठूलो लेख ब्रो. यो मलाई प्रोत्साहन र केही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू मलाई सम्झना. किन यो यति महत्त्वपूर्ण thats लगनशील भई धर्मशास्त्र पढ्दा जारी, बाइबल सधैं हाम्रो मन नवीकरण. र भनाइ जान्छ रूपमा, “यदि तपाईं यसलाई प्रयोग नगर्नुहोस्, तपाईं यसलाई गुमाउन”. यो पद हामी सिक्न के उतार्ने र यो एक बानी व्यवहार गर्न महत्त्वपूर्ण. अलमल्याउने, निराशा, संघर्ष गरिब बानी सक्छ ठीकसित छैन जब, थप निराशा परिणामस्वरूप. परमेश्वरको सधैं सबै भन्दा राम्रो तरिका हो, Christlikeness शान्ति र आनन्द र परमेश्वरको महिमा को तरिका हो.
Sammy Msiska • जनवरी 21, 2015 मा 11:08 बजे • जवाफ
तपाईं परमेश्वरको महिमा गर्न आफ्नो हरेक उपहार प्रयोग गर्नेहरूलाई मान्छे राम्रो उदाहरण हो. म बस शब्द बोल्ने तर पनि यसलाई गरिरहेको छैन हेर्न खुसी छु. तिमी मलाई यात्रा प्रेरित…Glorifyin परमेश्वरले राख्न
TamekaBowen • मार्च 2, 2015 मा 5:21 बजे • जवाफ
त्यसैले शक्तिशाली. सबै साँच्चै येशू र येशूले सिर्जना गरिएको थियो. के आफ्नो सुसमाचार उत्थान राम्रो मौका ख्रीष्टको शरीर हाम्रो प्राण उद्देश्य छ!! Hallelujah के एक शक्तिशाली सन्देश!! :-)
लियो • जुन 24, 2015 मा 6:07 बजे • जवाफ
किनभने दैनिक म अलि दायाँ र धेरै गलत म यसलाई प्रेम, म यो धेरै घृणा छु, तर तपाईंको शब्दहरू मलाई परिवर्तन आशा दिनुभयो. हामी राम्रो गरिरहेका छन् के ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र यो हामीलाई सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ
लियो • डिसेम्बर 11, 2015 मा 2:01 बजे • जवाफ
अकल्पनीय, यो प्रचार लागि परमेश्वरको प्रशंसा, उहाँले स्पेनिश आफ्नो भिडियो अनुवाद गर्न सक्छन् चाँडै पर्खेको, हामी धेरै उपयोगी हुनेछ!